Munich inozopedzisira yasiya Gnu / Linux yoichinjira kuWindows | Linux Vakapindwa muropa
Munich inozopedzisira yasiya Gnu / Linux yoichinjira kuWindows
Mwedzi mishoma yapfuura takanzwa nhau dzisingafadzi kuti makomisheni akasiyana siyana aipa zano kuMunich City Council kuti vasiye Gnu / Linux vadzokere kuWindows. Huwandu hwacho hwakapa zano neimwe nzira, ndosaka midhiya mazhinji pamwe nevabloggi nemasangano vakatsoropodza chirevo, asi zvinoita sekunge chichava chokwadi.
Mapato anotonga eMunich City Council akapa chirongwa chekutanga kutamira kuWindows, kuisa 2020 nguva yekupedzisira yekupedzisa maitiro.
Izvi zvinoreva kuti zvikwata zvese zveCity City zvichavandudzwa uye ichatakura Windows 10 senzira huru yekushandisa. Kunyangwe avo vane chekuita vakataura kuti LiMux haizonyangarika kana makomputa neiyi sisitimu inoshanda, kunyangwe iwo achizove sekondari makomputa ayo achabatana neWindows network
LiMux icharamba ichivapo mune mamwe makomputa eMunich City Council
Asi chinosuruvarisa pamusoro penyaya iyi ndechekuti zvese zvinoratidza kuti kwete chete iyo system yekushandisa ichashandurwa asi kuti ichaedza kuenda kune iyo fomati fomati. Saka, lMunich makomputa haazove chete neWindows 10 asi zvakare ichave iine Hofisi 365 yekunyorera package, uko vashandi vanofanirwa kushandisa Izwi, Outlook, Excel, nezvimwe ... kuti vakwanise kushanda. Pamusoro pechirongwa ichi, hapana imwe yemahara nzira yakapihwa, saka yemahara fomati inoita kunge iri kudzikira kuGerman, zvirinani muguta reMunich.
LiMux kugovera kunobva paUbuntu 12.04, yechinyakare uye isingashande vhezheni. Uye panzvimbo yekuvandudza, vagadziri veLiMux vatevera kuburikidza nazvo; kune rimwe divi, hazviite chero kudzidziswa kwakagadzirwa kushandisa iyi sisitimu yekushandisa, saka kusagutsikana nekuparadzirwa uku kwave kuri kwese Kusvika padanho rekuti Windows inosarudzwa chero zvodini? Chokwadi, hapana munhu mukati mehurumende akapokana neshanduko iyi uye huwandu hwemari iyo shanduko iyi ichasanganisira haisati yazivikanwa.
Nehurombo Munich harisi iro guta rekutanga kuita izvi. MuSpain isu tinoziva iyi mhando yemamiriro ezvinhu chaizvo, asi izvi zvave zviri kwenguva yakati rebei uye zvaitaridza kuti zvaisazoitika futi… Kusvikira izvi.
Ngatitarisirei kuti Munich haisi muenzaniso kune mamwe maguta eEurope uye dzokera kune yakavanzika fomati kusiya parutivi fomati yemahara. Y Unofungei? Iwe unofunga izvo zvakaitwa naMunich isarudzo yehungwaru?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Munich inozopedzisira yasiya Gnu / Linux yoichinjira kuWindows
Simba rine simba "chipo chemari" isu tatoziva kuti mawindo emadhora anowedzera sei, mumwe munhu anenge ahwina chimwe chinhu chokwadi.
Pindura kune leopoldo
Edwin zapata akadaro
Zvinotarisirwa, Microsoft yakasiya parutivi chikamu chehunyanzvi sechinhu chakakura chezvigadzirwa zvayo uye yakazvipira kune nzira zviri pamutemo uye ndinofungidzira kuti hurumende inopinza zvigadzirwa zvayo nechisimba, zvinosuwisa sei kuti kuyedza kwenharaunda iri kuwedzera kuvharika nemhando iyi yezano.
Pindura Edwin Zapata
Ini ndinofunga vakanganisa, zviri nyore, ndinofunga ndinoshandura kuUbuntu kana Xubuntu (ndinoifarira zvirinani) uye ndinoenda nayo kwauri canonical
Iwe unotaurira meya uye kanzura wetekinoroji: «mamirioni euros kune yega uye iwe unoisa ibm 8088 ine msdos 3.30 ivo ndokuenda ndokuisa.
zviri pachena kuti ndiani uye chii chinotonga pasi, hunyengeri, mari uye kusaziva. Saka zvinoenda
Pindura kuna juliuconikeladojuliuco
Ini ndinofunga isuwo tinofanira kuita kuzvitsoropodza. MuLinux isu tine akanakisa desktop masisitimu, mafaera ekutsvagurudza, makomba uye zvimwe zvakawanda zvakanaka. Nekudaro, kana zvasvika pakuzadza desktop nemahofisi kunyorera uko mushandi wemuhara yeguta ari kuzoita basa rake, isu hatipe chiitiko chakakura. Parizvino, M $ inopa kubatanidzwa pakati pekushandisa kwayo, masevhisi ayo pamwe nezvivakwa izvo zvisipo. Mimwe mienzaniso:
- Kopa tafura yepamusoro kune email kana bhuku reOneNote (uye kana ndiri kungotaura nezvekuchengetedza mafomati, handisi kutaura nezvekuisa chinhu.
- Gadzira manotsi emusangano anogara achienderana zvakananga kana iwe wagadzira musangano.
- Chengetedza waunogovana naye gwaro rauri kushanda rakananga kubva kuIzwi / Excel / Powerpoint, nezvimwe.
- OneNote haina kana imwe nzira yekuisvika.
- Imwe yeaya maficha ane hanzvadzi yake diki pane mapuratifomu enhare.
Kupinda mugobvu hakusi kuzobatsira uye isu tinofanirwa kutsvaga modhi inobatsira kubhadhara mari inoshamisa yekuedza kugadzirisa matambudziko aya (ini handizive, ndingade)
Mune ino kesi inongova nyaya yemari. Kuongorora uku kwakapihwa kukambani ye 'pro' microsoft uye zvinofungidzirwa kuti yakatobhadharwa "muchivande" neMicrosoft.
Uye dai vanga vachishanda kwemakore uye vasina kunyunyuta, imhaka yekuti izvo zvavanazvo zvinoshanda.
Anokudzwa bede akadaro
Chinyorwa ichi chinongorevera chimwe chokwadi: iyo kanzuru yeguta reMunich inobvisa Linux. Izvo hazvipe chero ruzivo rwekuti nei kubvunza femu yaita iro kurudziro.
Kana isu tikakanganwa nharo dzekuti vese vezvematongerwo enyika vane huwori uye kuti mari yakasviba uye haina hunhu saka tichafanira kuzvibvunza isu kuti chii chakakanganisika. Uyu mubvunzo wakanyanya kunetsa kupindura uye unoda zvakawanda kwatiri. Zvakaoma nekuti tichafanira kutora ruzivo pamaonero evashandi vekanzuru uye izvi hazviwanikwe zvakananga. Tichafanirwawo kuti tinzwisise mari dzekuvandudza dzakaitwa nekanzuru yeguta reMunich uye toyera mutengo wakatarisana nekutadza kungangodaro kwakagadzirwa uku. Kupindura kubva papurupiti yehunhu hwakakwirira nekuramba Microsoft usinganzwisise zvikonzero nei zvakaipa zvakakunda hazvibatsire kuvandudza software yemahara.
Pindura kune Anoremekedzwa Bede
Ini ndoziva iyo nyaya pachezvangu, inongova nyaya yemari, sekutaura kwandamboita, asi zvakanyanyisa inogona kunzi "chiokomuhomwe" munzvimbo dzakakwirira kuita shanduko.
Fedora 25 ISO mifananidzo inogadziridzwa
Zvikoro 5.1 zviri pano nekuvandudza kukuru